Mahad Alle ayey u sugnaatay, nabadgalyo iyo naxariis korkiisa ahaatee Rasuulkeenii Muxamed, iyo afartii khulafaa’u Raashidiintii, intii raacday ee xaqa ku rumeysay Illaahey raali ha ka ahaadee, waxaan akhristayaasha la socday aqrinta sheekadii taxanaha aheyd ee Maxamey ku doorteen Islaamka? Kaga cudur daaranayaa dib u dhacii ku yimid soo gudbinta sheekadan xiisaha lah, taasoo aan sabab ugu dhigaya daruufo ila soo guboonaday sidaa daraadeed waxaan markale leeyahay walaalahey ka raali noqdo soo daahista sheekadan taxanaha inoo aheyd!
Waxaanu la soconay qeybihii hore ee aan ka shakeeynayey sidey ku soo Islaameen gabdhii la oran jiray Mariam Elsbornsson iyo wiilka aynaan dhameyn sheekadiisa ee Ismail Stand oo labaduba qormooyinkeeni hore ku soo sheegnay sababihii keenay iney diinta Islaamka qaataan iyo markii ay kamid noqdeen muslimiinta caalamka sida guud ahaan xaaladooda ahaatay.
Hadaba waa kan Ismail Stand oo halkiisii inooga wada sheekadii ku saabsaneyd islaamidiisii iyo qaadashada diinta Islaamka.
Durba waxaan ku cararay markii aan soo galay masaajidka dhankii uu iga xiggay imaamkii masaajidka oo inta aan hortiisa fariistay u sheegay inaan rabo inaan soo islaamo. Imaamkii isagoo aad u faraxsan ayuu gacmo furan igu soo dhaweeyey iina sheegey inaan Islaamka iyo diinteeda cidna iga xigin, isla goobtiiina waxaan ku qirtay shahaadada iyo cadeynta in Alle uu jirro, Muxamedna uu yahay Rasuulkiisii NNKH. Xilliga aan islaamka qaatayna markaas waxey aheyd sanadku markuu ahaa 1997-dii.
Dhab ahaanse islaamideydii kadib waxaan ogaaday ”In qofka marku uu dhasho uu yahay muslin, balse ay ku xiran tahay ruuxa soo koriyey iyo sida lugu soo bar baariyo markaasina carruurtu ay qaadanayaan dariiqii lugu soo koriyey”
Mahad Alle ayey u sugnaatay markii aan Islaamka qaatay waxaa dusheyda ahaaday degenaan iyo xasilooni aanan helin intaan jiray. Waxaana laga soo bilaabo maalintaas rumeystay in ”carruurnimadeydii aanba ka tirsanaa deegaanka muslimiinta anigoon ogeyn sababta aan uga mid ahaa”
Sadex bilood kadib markii aan soo islaamay waxaan taleefan u diray hooyadeey oo aan u sheegay inaan galay Diinta Islaamka. Hooyo iyadoo ay carro ba’ani qabatay ayey i weydiisay iney jirto cid igu qasabtay iyo inkale.
Inkastoo ay hooyo aad ugu xumaatay arinta aan u sheegay ee ku saabsan islaanimadeyda hadana ugu danbeytii waan ku guuleystay inaan u sharxo sababihii igu kalifay qaadashada Islaamka.
Isbadalka guud ee lasoo darsay nafteyda iyo hab la dhaqanka dadka aad bey hooyo uga heshay waxeyna qiratay iney tahay arrin wanaagsan oo lugu farxo sida nabadgalyada iyo degenaanta ku jirto ee aan u dhaqmayo.
Mararka qaar waxey aad ula yaabtaa dhaqankan cusub, tusaale marka aan cunteynayo dhulka ayaan fariistaa, sidoo kale markaan cunayo cuntada gacmahana ayaan ku cunaa ee ma istocmaalo fargeetooyinka iyo mindiyaha lugu adeegto marka cuntada la cunayo.
Waxaan kuman malaayiin oo mahadnaq ah u celiyaa Illaahey cisiga iyo sharafta leh ee igu hanuuniyey wadada toosan ee iga soo leexiyey jidkii halaaga badnaa ee aan ku noolaa. Asxaabteydii hore qaarkood waxey u dhinteen maandooriyihii kala duwanaa ay isticmaali jireen intii soo hartayna waxey ku jiraan nolol qarabin oo u baahan in laga duceysto.
Alxamduli-Laah, hooyodeey iyadoo aad ula tacajabsan nolosheyda markastana aad ii soo dhaweysa ayaan u sheegay in ”Ineysan shayaadiintii Michael Jackson, Jimmy Hendrix iyo Elvis-ba, aysan ii aheyn kuwo aan ku daydo ee Rasuulkii Alle NNKH uu yahay kan keliya mudan inaan ku daydo. Qudheedana ay ii cadeysay ineysan aheyn shayaadiintaasi kuwo lugu dayan karro.
Islaamideydii kadib waxaan ka fahmay Islaamka wax badan oo iga dahsoonaa taasoo ah in Illaahey ummadiisa faray iney isku naxariistaan isna kaalmeystaan si Illaahey uu u siiyo naxariista guud iyo midiisa gaar ahaaneed.
Kitaabka Quraanka ah waxuu ii yahay baasaboor oo kale la’aantiisana maba dhaqaaqi karro sidaa daraadeed waxaan afar iyo labaatanka saac xambaarsan nahay quraanka kariimka ee Eebe.
Weliba waxaan aad u jecelahay akhriska Suuratul Fiil oo Ilaahey si wanagsan ug ka sheekeynayo sidii uu u galay qoomkii la oran jiray Asxaabul fiil ee hogaaminayey ninkii xabshiga ahaa ee Yaman kasoo duulay. Illaahey isagoo suuradaas noogu sheegayo siduu u haligay qoomkii Asxaabul fiil ayuu yiri ”Miyaad ogtahay sida Rabbigaa u galay asxaabtii maroodiga, miyaan Eebe ka yeelin dhagartoodii wax dhumay. Oo uusan ku dirin shimbiro koox ah”.
Dhab ahaan suuradaasi akhriskeeda aad baan u jecelahay, waxeyna muujineysa sida Illaahey u yahay kan awooda leh maqluula kownkan saarana ay awaamirtiisa ku socdaan, misna ay si gaar ahaaneed suuratul Akhlaas u sharxyso Kelinimada Illaahey ee aan cidi la wadaagin.
Markii aan qaatay Islaamka aad baan u ciseeyey Diinta waxaana nafteyda iyo waxa Islaamka i farayo ka dhowray wax shabahaad (ekaansho) ah oo ku lug lahaan karo diinta masiixiga iyo caadooyinkeygii hore.
Maalin baa waxaa dhacday in walaashey oo aan Islaamka qaadan ay la aroosay, xafladii arooskeedana lugu dhigay kaniisad. Anigu xalafadii arooska oo la iiga yeeray ayaan tagay waxaana horey u sii xirtay astaantii muslimiinta lugu yaqiinay ee Qamiis iyo Cimaamad, waxaana aaad ii farxad geliyey maalintaasi ineysan jirin cidna igu takoortay dharkii aan xirnaa.
Markii iigu farxada badneyd nolosheyda oo aanan ilaaweyn marka laga reebo islaanimadeyda kadib, waxey aheyd in hooyadeey muddo kadib ay ii sheegtay iney qaadatay Diinta Islaamka islamarkaasina ay qiaratay shahaadada iyadoo cadeysay in Illaahey SWT uu yahay Allaha xaqa lugu caabudo Muxamedna uu yahay Rasuulkiisii NNKH.
Ugu danbeyntii waxaan aad ugu murugeysnahay sida ay maanta tahay xaalada dadka muslimiinta ah meelkasta oo ay caalamka ka joogaan, kuwaasoo dhab ahaan maanta ah kuwo aad u liito oo aan arruursaneyn. Waxaana in badan oo iyaga kamid ah ay isku qaldaan diinta iyo dhaqamo caadooyin horey u jiray. Allena waxaan ugu baryayaa inuu ka qaado dhibka sida gaar ahaaneed u saaran muslimiinta meel walba islamarkaasina uu ufidiyo denbi dhaaf iyo naxariistiisa gaarka ah.
Lasoco cadka danbe insha Allaah iyo soo islaamidii Fredrik Dahlberg!
Faafin: SomaliTalk.com | October 1, 2003